Mila mitokana ny vita, mila mitokona ho hita… | NewsMada
Tena miasa sy mahavita zavatra ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao? Mampiady hevitra izay, tsy mampitovy fijery, hifandroritana aza… Arakaraka ny toerana misy ny tena io, izay heverina ho zava-dehibe sy maika, izay kendrena amin’izany. Ny itsitokotokoan’ny loha, hono, samy manana ny heviny.
Na izany aza, eo ny vahoaka mitsara: tafapaka amin’ny fiainany andavanandro ny fanarenam-pirenena sy fampandrosoana? Na misitraka izay ataon’ny mpitondra ny vahoaka ifotony… Eo ny fampanjakana ny fandriampahalemana, ny famoronana asa, ny fanalefahana ny fidangan’ny vidim-piainana…
Mila mitokana izay vita ny mpitondra fa tena miasa ary misy tokoa ny vokatra: tratra ny fanamby, tanteraka izay nampanantenana. Ho amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka tokoa ny asa atao sy vita, fa tsy ho zavatra hafa: fampielezan-kevitra politika, famonoana afo na famonoana lolo, famalifaliana…
Tena araka ny hetaheta sy ny filan’ny vahoaka ny asa atao amin’izany? Fa tsy haitraitra, sanatria, na izay mety sy mahasoa ny tena, na ahazoana tombondahiny manokana… Tena fahavononana hanarina fiainam-bahoaka noho ny fitiavan-tanindrazana tokoa no manetsika sy manesika, fa tsy pilia vava…
Lazain’ny sasany fa toa misy elanelana be eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra. Tsy misy na tsy ampy ny fifampitokisana, na tsy araka izay tena hetahetam-bahoaka ny ataon’ny mpitondra… Mahalala sy maharaka ny fahasahiranam-bahoaka? Na tsy afa-manoatra fa maika avokoa ny zava-drehetra…
Sao varivarian’ny lavitra, tsy mahita ny ambany maso? Indraindray na amin’ny lafiny sasany, mila mitokona koa ny vahoaka ho hita. Toy ny nataon’ny mponinan’Ambohipo, nitaky ny fanamboarana ny lalana eny Andohan’i Mandroseza. Aiza na inona koa ny manaraka? Mba tsy hetsehina kosa vao mihetsika…
Mahalala mialoha izay mety hitranga ny mpitondra: miasa, mahavita. Raha tena miasa tokoa: tsy mila mitokana ny vita, mety tsy ho araka; na mitokona vao ho hita ny vahoaka, mety tsy misy mpanaraka…